KhabarSamachar | कलेजो जोगाउन अपनाउनुहोस् यी ८ घरेलु उपाय
कलेजो जोगाउन अपनाउनुहोस् यी ८ घरेलु उपाय
२०७८ भाद्र ३, बिहीबार १८:१९
काठमाडौं – कलेजो मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । पाचन प्रणालीमा समस्या आउनुमा ८० प्रतिशत भूमिका कलेजोको नै हुने बताइन्छ ।कलेजोको मुख्य काम खाना पचाउने, उर्जा भन्डारण, विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने, प्रतिरक्षा प्रणालीको रक्षा गर्ने र शरीरलाई चाहिने रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने हो । आजकालको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थकर खानपानका कारण कलेजोमा असर परिरहेको छ । चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थको सेवन पनि कलेजो बिग्रने अर्को कारण बन्ने गरेको छ । लिभर अर्थात कलेजोमा खराबी भएका कारण धेरैको मृत्यु हुने गर्छ । धेरै रक्सी खाने बानी, ड्रग्स लिने, कुनै कुराको इन्फेक्सन , खानपानको अवस्थ जीवनशैली आदिका कारण कलेजोमा खराबी देखिने गर्छ।
आँखाको सेतो भाग पहेंलो देखिन सक्छ।
दिसाको रंग फिका हुन्छ ।
शरीरमा बिना कारण चिलाउन थाल्छ ।
एक्कासी पेट ठूलो हुन्छ ।
शरीरको कुनै भागमा काट्यो भने रगत बगिरहन्छ।
कलेजोमा सुरुमा थोरै खराबी हुँदा, कलेजो आफै निको हुन्छ । तर बारम्बार त्यसमा असर पर्यो भने कलेजो बिग्रिन्छ। यसबाट बच्नको लागि आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ साथै निम्न लक्षण देखिएमा जांच गराउनुपर्छ। एकपटक कलेजो बिग्रिएपछि त्यसले निकै समस्या पार्छ । आखिर कलेजो स्वस्थ राख्ने उपाय के हुन् त ?
उपत्यकामा भेरोसेलको दोस्रो डोज असोज ४ गतेदेखि लगाइने
गर्मी मौसममा लाग्ने रोगबाट कसरी बच्ने ?
के तपाइलाई कब्जियतले सताएको छ ? के हो कब्जियत ? यसो गर्नुहोस्
मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोबाट बच्ने उपाय